Yakanakisa 3L Mhuri Oxygen Concentrator Oxygen Machine yeVakwegura Yakakwira Kukosheswa Oxygen Inhalation Machine OZ-3-01NWO Mugadziri uye Fekitori | FuluoEr
3L Mhuri Oxygen Concentrator Oxygen Machine yeVakwegura High Kusungwa Oxygen Inhalation Machine OZ-3-01NWO
OZ-3-01NWO ndeye 3L yekurapa giredhi okisijeni jenareta, inorema ingangoita 13kgZ, nyanzvi oksijeni kupihwa, oxygen yehupenyu.
OZ-3-01NWO ine gumi anoshanda mashandiro, 3L yekurapa giredhi okisijeni kugadzirwa, inopenya humidification mukombe, inofarira yakakwira-tsananguro hombe skrini, nguva yekuita, atomization basa, isina kujairika alarm, izwi kutepfenyura, ruzha rwekudzora dhizaini, 7-dura yekuchenesa, maawa 48 Shanda, nezvimwewo, kuzadzisa zvidimbu zvakasiyana zvemhuri.
OZ-3-01NWO yasvika muyero wezvekurapa wenyika, uye inongoda-kugadziridzwa kweyekuyerera mwero, inogona kukodzera kune ese marudzi evanhu, uye kufema kuri kutsetseka.
OZ-3-01NWO ine yakada kutsanangudza yakakwira-tsananguro hombe sikirini, unogona kuona zviri nyore skrini yese yekushandisa paunogara kana kurara pasi, iyo nhamba yakakura uye yakajeka zvakakwana, isingatyi presbyopia, uye inogona kuvhiyiwa mu nharaunda yakasviba. Uye zvakare, iyo micron yeOZ-3-01NWO Yepamberi atomization basa iri zvakare inoshanda, uye inogona kuve inoshanda kune dzihwa uye kukosora, izvo zvinogona kukubatsira iwe kuchengetedza atomizer.
OZ-3-01NWO inotora tekinoroji yeGerman uye yakachena mhangura isina mafuta compressor, iyo isingangochengetedza magetsi chete, asi zvakare inopa simba rakasimba, uye inoshanda nemazvo kwemaawa makumi mana nemasere.
OZ-3-01NWO yapfuura iyo CE / FDA yakapetwa mhando mbiri. Iyo inogadzira okisijeni yemumba ine yakasimba mabasa.
Chigadzirwa Mifananidzo Mufananidzo
Pashure: 5L Medical Oxygen Concentrator SD-05W -— Yechokwadi-nguva kuratidzwa kweokisijeni kusangana, mhedzisiro yeoksijeni kurapa inoonekwa.
Zvadaro: Wrist Magetsi sphygmomanometer [Muenzaniso nhamba: KP-7190]
Yakakwira Inoyerera Oxygen Concentrator
Okisijeni Concentrator 10 Lpm
Diki Oxygen Concentrator
5L Medical Oxygen Concentrator SD-05W —— Real-nguva ...